नेतालाई भ्रष्टाचार सिकाउने गुरु कर्मचारी हुन् – " सुलभ खबर "
काठमाडौं। नेपाली समाज कतातिर जाँदै छ? किन आम मानिसमा निराशा बढ्दै गएको छ? समाजकाम प्रगतिका बाधकहरू के हुन्? करिब ४ दशकदेखि नेपाली रंगमञ्च, अभिनय तथा हास्यव्यंग्य विधाका विशिष्ट परिचय बनाएका वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यसँग यी र यस्तै विषयमा लक्ष्मी बलायर र सीताराम बरालले कुराकानी गरेका छन्। जसको सम्पादित अंश आज शनिबारको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। प्रस्तुत छ, त्यसको एउटा अंश-